Somaliland oo markii ugu horreeysay Hambalyada 1da August udirtay Dowladda Puntland. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandSomaliland oo markii ugu horreeysay Hambalyada 1da August udirtay Dowladda Puntland.
Somaliland oo markii ugu horreeysay Hambalyada 1da August udirtay Dowladda Puntland.
August 1, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 5
Xoghayaha gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland Mubaarik Ismaaciil Taani, ayaa hambalyo u diray Dawlad Goboleedka Puntland xuska munaasibadda 1 Ogoosto awgeed.
Qoraal uu bartiisa facebook soo dhigay ayuu ku yidhi:
“Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa xuska sannad-guurada 21-aad ee ka soo wareegtay maalinta aas-aaska Dawlad Goboleedka Puntland darteed walaalaha reer Puntland oo ah jaarka bari ee Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan u rajaynayaa in ay sannadkan sannadkiisa ku gaadhaan badhaadhe iyo nabad-gelyo.”
Raiisl wasaaraha Somalia oo hambalyo ku aadan 1da August udiray shacabka Puntland.
Degdeg:- MD Farmaajo oo qaaday talaabo aan horay loo arag “wuu celiyay dhalashadiisi mareekanka”.
Waxan sodhaweynaya Hanbalyada garaka ah ee uu soo diray xoghaya gaarka ah ee madaxweynaha somaliland,Mubarag ismaciil taani,waxana habonayd in xaflada xuska dhalashada puntland in lagu martiqado masulinta somaliland,hadeysan iyagu Didiin.
Budhleyn Shoode Somaliland waab Hambalyeynayaa. Daadaalaaba gaadhee Dadaala. Nabada sugta. Danihiinana ka shaqeeya.
Mareegta marqaan News waxa ku xiran dad kala duwan,kuwo luqada somaliga qoralkeda sixi karin,waxa kale oo aad ku arkeysa dad wax garad ah & kuwo akhlaqa xun,wa meel dad badan kulmisa.
Hanbalyo Guuul & Horumar Puntaland.